Queen Pfuma | Coinfalls Casino
Queen Pfuma ndiko kwakajeka slots mutambo kuti kunokupa 117,649 Megaways kuhwinha. muronga pamusoro 6 X 7 nokudzedzereka afoot, ichi Big Time uchitamba mutambo wacho dzinofambiswa runako kunouya zvizere vanodzungunyika remake uye Reel aud kuchiitwa. The Graphics hwakajeka vakatongoparadzwa uye vane hwoumambo vanonzwa navo chindori-rakazara zviratidzo aishongedza ari Gwenzi.
Big Time uchitamba mutambo wacho uri entrant idzva iri paIndaneti playing uchitamba mutambo wacho indasitiri uye akasunungurwa gumi mitambo slots kusvikira zvino uyewo paIndaneti Blackjack uye Roulette. Makuru Australia, Sydney, vane vatengi muchimiro nyika dzokubhejera vakakurumbira kupararira mhiri nyika. mitambo yavo anowanika mumitauro inopfuura makumi maviri kumbotaura dzakasiyana dzepasi.
Queen Pfuma chinhu chinoshamisa zvikuru kutarira slots mutambo anouya aine akasiyana vanodzungunyika mamiriro. rine 6 hunoparara pamwe 7 zviratidzo achitora mumwe payo. zviratidzo izvi zvinosanganisira Ziso Horus, Scarabs, Ra zvishongo pamwe Queen pachake anoita se dzesango. Yose Kutarira uye kubata mutambo wacho classy uye chokukomborerwa zvose kwoumbozha. The mesmerizing Queen rinovapa ane 7x multiplier chero Unobata pangoro mutambo uye nokukurumidza unotsiva zvose zviri ari vanodzungunyika kuita zvizere vanodzungunyika dzomusango. Saka kana iwe kugadzira kuhwina mubatanidzwa uchishandisa 2 zvikara Gwenzi, muwane akanaka 49x multiplier. The pyramid symbol is the only symbol that pays even if you land two of them on the adjacent reels. Kune vamwe vapfumbamwe zviratidzo kunze dzomusango uye kusanganisira nhanhatu nokutamba kadhi zviratidzo. payouts yavo inogona kuongororwa kuburikidza nekudzvanya pamusoro paytable bhatani.
Reel aud kuchiitwa paruchaitika randomly chero kuruka. Pano Gwenzi nekuwanza kubudisa kusvika matanhatu fanana Gwenzi. Uyezve, zvizere zvikara Gwenzi uyewo muwande zvibereko kumusoro 5 anoita Gwenzi uzere yomusango uye chero multiplier anopindwa aishanda kwavari.
Megaways anopa iwe 117,649 nzira kuita kuhwina mubatanidzwa. Izvi zvinogoneka chete nokuda awanda vanodzungunyika mamiriro i.e 6 Gwenzi uye 7 zviratidzo afoot.
Queen Pfuma ane tsvarakadenga dzakatsarukana Kudzokera mutambi chikamu 96.9. Shoma bheji inoshandiswa kutamba zviri 0.20 uye kufadza ndiko £40.
Queen Pfuma riri kutarisa muIjipita-music slots yakanaka chaizvo kuti rinovimbisa dzakatsarukana Unobata kuti mutambi. The Full vanodzungunyika dzomusango uye Reel aud zvinhu zviri runako anoyevedza uye regai une varaidzo kwazvo apo achitamba nayo.